Thenga i-Bitcoin eChina Ngoko nangoko nangokuKhuselekileyo | Paxful
Thenga uze uThengise i-Bitcoin (BTC) e-China
Yenza utyalo-mali lwe-Bitcoin ngokulula nangokukhuselekileyo. U-Paxful yeyona ndawo ifanelekileyo yokuthenga, ukuthengisa nokuthumela i-Bitcoin ngeendlela ezingaphezu kweziyi-300 zokubhatalela i-Bitcoin eziquka udluliselo-mali lwebhanki kunye ne-WeChat Pay!
Tshintshela kulwimi lwesiTshayina (简体中文(SC))
Elona xabiso—I-ID ingafuneka
Ngoko nangoko—I-ID iyafuneka
Zingaphezu kwe-300 iindlela zokubhatalela
Khetha kwiindlela zokubhatala eziphezulu e-China. Okanye khangela nayiphi na enye indlela yokubhatala ngokusuka kolu khetho lungezantsi lweendlela eziphambili.
2. Tayipha imali oza luyisebenzisa
Imali ngokwe i-Yuan (Chinese) Renminbi
1. Khetha i-WeChat Pay uze utayiphe isixa se-Bitcoin osifunayo. Umthengisi uza kukunceda ufake imali kwiwalethi yakho ye-Bitcoin yakwa-Paxful.
2. Landela imiyalelo yakhe yokudlisela imali. Ukusebenzisa i-WeChat Pay yeyona ndlela ikhawulezayo nekhuselekileyo yokuthenga i-Bitcoin e-China.
3. Emva kokuba lwenziwe udluliselo-mali, Cofa kwiqhosha elithi "Ndibhatale" uze ulinde umthengisi akukhululele i-Bitcoin.
4. Ii-Bitcoin zifumaneka ngoko nangoko kwiwalethi yakho yakwa-Paxful kwaye zingathunyelwa naphi na emhlabeni kwangoko.
1. Khetha uDluliseloo-mali lweBhanki lukaZwelonke uze utayiphe imali oza kuyisebenzisa ngasentla. Umthengisi uza kukunceda ufake imali kwiwalethi yakho ye-Bitcoin yakwa-Paxful.
2. Landela imiyalelo yakhe yokudlisela imali isuka kwiakhawunti yakho yebhanki iye kweyomthengisi. AZISETYENZISWA IINTLAWULO EZIKHAWULEZAYO ZE-TELLER, ALUSETYENZISWA UDLULISELO-MALI LWE-ATM.
Ukuba ukhetha ukuthenga i-Bitcoin ngekhadi lesipho elifana ne-Amazon Gift Card kuza kufuneka uwathenge nge-KHESHI KUPHELA. Abathengisi bethu bafuna umfanekiso werisithi ngaphambi kokuba bakunike i-Bitcoin.
1. Hamba uyokuthenga amakhadi esipho ngekheshi kwivenkile ekwindawo ohlala kuyo okanye uthenge amakhadi esipho akwi-intanethi ku- Amazon.com .
2. Khetha indlela yokubhatala apha ngasentla uze utayiphe imali onayo ekhadini uze ucofe ku "Thenga i-Bitcoin ngoku". Iwindo entsha iza kuvula inexabiso elikhethwe ngu-Paxful (elona xabiso liphambili).
3. Funda imimiselo yexabiso uze uqalise urhwebo. Uplowuda imifanekiso esemva kwekhadi likhuhliwe kunye nerisithi. Qiniseka ukuba liyasebenza ikhadi kuqala! Cofa iqhosha elithi "Ndibhatale" uze ulinde umthengisi akhulule i-Bitcoin.
Nceda amaTshayina afumane i-Bitcoin uze ufumane iingeniso EZINKULU ezifikelela kwi 60% kwintengiso nganye. Qalisa ngoku ukuthengisa ngeeakhawunti zakho ze-WeChat Pay okanye ngeakhawunti yakho yebhanki yaseTshayina! Jonga isikhokelo sethu sasimahla. U-Paxful ufumana amawaka abathengi be-Bitcoin abavela eTshayina mihla le.
Wazi abantu abaninzi abafuna ukuthenga i-Bitcoin eTshayina? NgeKiyoski yakho ye-Bitcoin kunye nenkqubo yeQabane ufumana ingeniso ye 2% kurhwebo ngalunye ngonaphakade ngokwabelana nje ngelinki. Qalisa ngoku.
I-Bitcoin yi-asethi yedijithali exabisekileyo kwaye ikwaluhlobo lokubhatala. U-Paxful wenza kube lula ukuthenga nokuthengisa i-Bitcoin nge-WeChat Pay, ngodluliselo-mali lwebhanki nangamakhadi esipho. I-Bitcoin iye yayi-asethi exabisekileyo kwihlabathi lethu ledijithali. Ungayijonga njengegolide ekuhlobo lwe-intanethi. Ngokufanayo negolide, ixabiso le-Bitcoin lihla linyuka kwaye kulindelekile ukubona ukukhula okuzinzileyo kwixabiso le-Bitcoin, ingakumbi xa iimeko zezoqoqosho zingazinzanga.
Emva kokufumana i-Bitcoin ungenza nantoni na oyifunayo. Unokhetho lokuyigcina kwiwalethi yakho yakwa-Paxful, uthengise i-Bitcoin ngeedola zase-US okanye ngayo nayiphi enye ikharensi. Futhi i-Bitcoin yakho ungayithumela kuyo nakweyiphi na enye iwalethi ye-Bitcoin.
Sebenzisa i-Bitcoin kwizinto ozithandayo
Ungcakazo - BitCasino
Ii-elektroniki - NewEgg
Jika i-Bitcoin ibe yikheshi nge-Bitcoin ATM ekufutshane nawe - Imaphu ye-Bitcoin ATM